Maydka Xassan Abshir Faarax oo Muqdisho laga soo dajiyay - Tilmaan Media
Waxaa saaka laga soo dajiyay garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde maydka raysal wasaarihii hore ee dalka Xassan Abshir Faarax.
Madaxwaynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxkale ayaa garoonka Aadan Cadde kaga qaybgalay salaadda Janaasada marxuumka.
Madaxweynaha ayaa salaadda janaasada ka dib waxa uu si gaar ah ugu tacsiyeeyay qoyska marxuumka oo qaar ka mid ah ay ku kulmeen ,wuxuuna Alle uga baryey marxuuma in uu ka waraabiyo Jannatul Firdowsa,isagoo eheladana kula dardaarmay samir iyo iimaan.
Guddoonka Baarlamaanka,R/wasaare kuxigeenka Dalka,madaxweynayaashii hore, iyo xubno ka tirsan Golayaasha Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ka qeybgalay Salaadda Janaasada marxuumkaasi oo lagu wado in lagu aaso magaalada Garoowe.
Maydka Xassan Abshir Faarax ayaa loo sii gudbin doonaa magaalada Garowe halkaas oo haatan ay ka socoto diyaargarawga aaska. Waxaa lafilayaa in raysal wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xassan Cali Khayre uu Garowe gaaro si uu uga qayb qaatto aaska.
Xassan Abshir Faarax oo sidoo kale mar soo noqday duqa Muqdisho ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga oo uu in muuddo ah ku xanuunsanaa.